MAROVOAY : VOLA 3.000 ARIARY NO NAMONOANY HO FATY NY RAINYLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYMAROVOAY : VOLA 3.000 ARIARY NO NAMONOANY HO FATY NY RAINY
MAROVOAY : VOLA 3.000 ARIARY NO NAMONOANY HO FATY NY RAINY
Nananan’ilay tovolahy, 18 taona, vola 3.000 ariary ny rainy niteraka azy, saingy tsy afaka nanefa izany ka notaperiny tamin’ny vely famaky ny ainy. Izany ny zava-niseho tao amin’ny fokontany Mahatsinjo, kaominin’i Marovoay. Tranga izay nampivarahontsana ireo mpikirakira ny tambajotra sosialy.
“Efa fanaon’ilay raim-pianakaviana amin’ireo zanany ny mihindram-bola ary averina rehefa hariva ny andro, avy any amin’ny asa aman-draharahany. Tamin’ity tranga ity anefa, nilaza ity rainy fa mbola tsy nanana ny hanefana izany, ka nentin-katezerana sy naka fitaovana maranitra namonoana an-drainy ilay zanany lahy”, araka ny fitantaran’ny avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.
Nomarihin’ny zandary anefa fa tsy nandritra ny fotoana nitakiany ilay vola no nanaperany ny ain-drainy fa tampoka. Naka aina natory tamin’ny tsihy teo an-tokontany ilay raim-pianakaviana rehefa vita ny fifampiresahana, ka avy hatrany dia norarafany tamin’ny famaky lehibe teo amin’ny tendany. Nikararana ny rà ary fotoana fohy dia tsy tàna ny ain’ity farany.
Voamarina fa tsy mamo ilay tovolahy, saingy nahavita izao zava-doza izao. Tsy nananan’ireo mpitandro ny filaminana hantra izy fa avy hatrany dia nosamborina ary nanaovana fanadihadiana. Paikady nisorohana ny mety ho vokatry ny hatezeran’ireo mpiara-monina ihany koa izany, araka ny fanamarihana voaray. Ny 4 aprily no nidobohany tany am-ponja ary hatramin’izao dia mbola miandry ny fotoam-pitsarana azy ity tovolahy nahavanon-doza ity.
Partager la publication "MAROVOAY : VOLA 3.000 ARIARY NO NAMONOANY HO FATY NY RAINY"
Pingback: Lisa Brown
Weldon Fomby 20/12/2018 at 22:48 Repondre
Jasper Libberton 21/12/2018 at 18:22 Repondre
Joesph Haegele 22/12/2018 at 19:22 Repondre
Mariano Tuorto 01/01/2019 at 12:46 Repondre
Desiree Hartse 08/01/2019 at 14:19 Repondre
Pingback: campania international be 124 fn owl outdoor bench
Pingback: sms masivo apk
Luther Eblin 16/01/2019 at 14:00 Repondre
Stacey Bugg 21/01/2019 at 00:51 Repondre
Stacey Bugg 21/01/2019 at 10:17 Repondre